Ụbọchị ọmụmụ Songs - Birthday ngosi mmịfe Songs Aro
> Resource> Music> Birthday ngosi mmịfe Songs Aro
Gị 18 ụbọchị ọmụmụ, 40 ụbọchị ọmụmụ, ma ọ bụ 50th ụbọchị ọmụmụ na-eru nso, na ọ dịtụla mgbe ị na-eche banyere eme ka onye na 18, 40 ma ọ bụ 50th ụbọchị ọmụmụ ngosi mmịfe na ụbọchị ọmụmụ songs maka onwe gị? Ọ ga-abụ oké oge mgbe ị na-ahụ onwe gị otú na-eto eto na a ụbọchị ọmụmụ foto ngosi mmịfe mgbe ọtụtụ afọ. Ma ọ bụ ka ị chọrọ iji kwadebe a ụbọchị ọmụmụ ngosi mmịfe maka gị na ụmụaka? Ị nwere ike iwere nza nke foto nke ha site n'oge ruo n'oge, tinyere ha nwa, akụkọ ihe mere eme ụbọchị. Ha ga na-eto eto ngwa ngwa, na ị ga-achọta ọrụ ebube mgbe ị na-eme ụbọchị ọmụmụ slideshows maka ụmụaka. Isiokwu a ga-enye gị aro ụfọdụ na ụbọchị ọmụmụ songs na ụbọchị ọmụmụ ngosi mmịfe.
Part 1: The oké ndepụta nke ụbọchị ọmụmụ songs maka ngosi mmịfe Ndinam
Part 2: Ebe ahụ ụbọchị ọmụmụ songs na weebụ
Part 3: Olee otú ibudata ụbọchị ọmụmụ songs maka ngosi mmịfe eme
Part 4: Olee otú ime ka slideshows na ebudatara ụbọchị ọmụmụ songs
Part 5: Download niile music n'elu free na TunesGo
Lelee a ndepụta nke ụbọchị ọmụmụ songs na ị ga-ahụ na-atọ ụtọ na bara uru.
1. Ka anyị na-anụ ya maka nwa-Deniece Williams
Ike nkume, nkume na mpịakọta
4. Obi ụtọ na Birthday Songs-Frank Sinatra ChrisVsibayaN
ụbọchị ọmụmụ song
5. Obi ụtọ na Birthday Darlin'-Conway Twitty
Conway Twitty bụ ihe American n'ịkụ egwú na-agụ egwú. O nwere ihe ịga nke ọma na mba, nkume, R & B, na pop Genres.
6. Lisa Ya ụbọchị ọmụmụ gị-Michael Jackson na The Simpsons
Michael Joseph Jackson bụ onye America na-agụ egwú, songwriter, ndekọ-emeputa, egwú, na omee.
7. Obi ụtọ Obi ụtọ na Birthday Baby-Ronnie Milsap
Ronnie Lee Milsap bụ ihe American mba music-agụ egwú na pianist. Ọ bụ otu n'ime mba music kasị ewu ewu na na-eru n'okwu performers nke 1970 na afo 1980, Otutu.
8. Mgbe m na-etolite Iji Nwee A Man-osimiri Boys
Brian Wilson, Mike Ịhụnanya
Ike Pop, pop nkume
The Beach Boys bụ onye American oké nkume mmachi guzobere Hawthorne, California n'afọ 1961. The ìgwè mbụ lineup ẹkewetde nke ụmụnna Brian, Dennis na Carl Wilson, ha na nwa nwanne nna Mike ịhụnanya, na enyi ha Al Jardine.
9. ị mara oke mma -Joe Cocker
10. Gịnị a Ebube World-Louis Armstrong
Nkebi nke 2: Ebe ahụ ụbọchị ọmụmụ songs na weebụ
E wezụga n'elu ụbọchị ọmụmụ songs, i nwere ike mkpa ọzọ ego ha na-ahụ ọtụtụ ihe songs. N'okpuru ndị dị otú ahụ a ọnọdụ, ndepụta nke music saịtị na music video saịtị n'okpuru kwesịrị nnọọ aka. Ego ha.
Pandora bụ-nri ebe-enuba ọtụtụ nde songs na iche iche iche iche.
YouTube nwere music ọwa na i nwere ike ịhụ a otutu music videos na-ekiri online.
Spotify-enye gị nweta tọn songs na dị na niile ngwaọrụ. MTV bụ ebe kacha mma ịchọta a otutu music videos nile di iche iche.
Grooveshark bụ a free music ọrụ na-akwadebe nza nke magburu onwe songs na-ege ntị. VEVO nwere otutu nke nwebiisinka music videos na i nwere ike enuba online.
iTunes Radio bụ a free music ọrụ dị na kọmputa na niile iDevices. Yahoo Music-eme dị ka onye na search engine n'ihi na ị na-ahụ oké music ego.
Songza awade a otutu listi ọkpụkpọ n'okpuru ọnọdụ dịgasị iche iche n'ihi na ị na-ege ntị. Vimeo, dị ka a video saịtị, nwere udi nke music ebe ị pụrụ ịchọta a otutu music videos.
Nkebi nke 3: Olee otú ibudata ụbọchị ọmụmụ songs maka ngosi mmịfe Ndinam
Ebe ọ bụ na i nwere ike ịhụ ụbọchị ọmụmụ songs si dị iche iche na isi mmalite dị ka music saịtị ma ọ bụ video saịtị. N'ebe a, anyị ga-eduzi gị site ibudata ụbọchị ọmụmụ songs ndị na isi mmalite karị.
Mmemme mkpa ka ị download ụbọchị ọmụmụ songs si music saịtị-Wondershare Streaming Audio Recorder
1. Download ụbọchị ọmụmụ songs si nile di iche iche nke music na saịtị na efu àgwà ọnwụ
2. weghachite song ọmụma amamihe, gụnyere album nkà, song aha na ọtụtụ ndị ọzọ
3. Ịtọ oge ibudata song listi ọkpụkpọ na-akpaghị aka kewaa abụọ songs
Olee otú iji Wondershare SAR ibudata ụbọchị ọmụmụ songs si music saịtị
Na-ahọrọ nri version nke usoro ihe omume na wụnye ya na kọmputa gị. Ẹkedori ya iji nweta njikere mgbe nwụnye.
Nzọụkwụ 2. Malite ibudata ụbọchị ọmụmụ songs
Pịa Record bọtịnụ na n'elu aka ekpe wee gaa music saịtị ịchọta ụbọchị ọmụmụ songs na-egwu. Ka anya dị ka e nwere ụda na kọmputa gị, ngwá ọrụ a ga-dee ya ala ma zọpụta gị na kọmputa.
Nzọụkwụ 3. Chọta nke ụbọchị ọmụmụ songs ma ọ bụ nyefee ka iTunes
Aka ịchọta ndị music na kọmputa gị, gị na mkpa iji họrọ songs nad pịa nchekwa na akara ngosi na ala.
Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu egwú na gị obere ngwaọrụ dị ka iPhone, iPad, ị ga-mkpa nyefee songs ka iTunes mbụ. Họrọ songs na Library na pịa Tinye ka iTunes bọtịnụ.
Mmemme mkpa ka ị download ụbọchị ọmụmụ songs si music video saịtị-Wondershare AllMyTube
1. Download music vidiyo si na ụdị nile nke videos saịtị gụnyere YouTube, VEVO na ndị ọzọ
2. Wepụ audio faịlụ site videos mfe
3. Download vidiyo na batches na ngwa ngwa
Olee otú iji Wondershare AllMyTube ibudata ụbọchị ọmụmụ songs si music video saịtị
Na-ahọrọ nri version nke usoro ihe omume iji wụnye na kọmputa gị. Anyị ga na-Windows version dị ka ihe atụ. Ọ bụ isi window nke usoro ihe omume na ihe ziri ezi.
Nzọụkwụ 2. Download music videos
Gaa otu n'ime music video saịtị na-egwu ụbọchị ọmụmụ songs-amasị gị. Ị nwere ike ịchọta a Download bọtịnụ na n'elu nri. Pịa bọtịnụ na-enweta video ebudatara. Ị nwekwara ike gbalịa na-edegharị ihe video url na pịa Paste URL button na-video ke otu ụzọ.
Nzọụkwụ 3. tọghata na vidio egwú MP3
Gaa Emechara ịchọta ebudatara videos. Pịa tọghata na nri ma họrọ MP3 ma ọ bụ ndị ọzọ na audio format dị ka mmepụta usoro. Press OK na-amalite akakabarede.
Nkebi nke 4: Olee ka ngosi mmịfe na ebudatara ụbọchị ọmụmụ songs
Mgbe ị na-ebudatara ụbọchị ọmụmụ songs, i nwere ike iji ha na-eme ka slideshows. Ebe a bụ usoro ihe omume gị mkpa na otú.
1. Tinye gị niile foto, videos na songs na-eme ka slideshows
2. Tinye dị ka ọtụtụ mmetụta dị ka ị pụrụ ime iji ngosi mmịfe
3. Ekekọrịta ngosi mmịfe ka YouTube ozugbo
Olee otú iji Wondershare DSB ka slideshows na ụbọchị ọmụmụ songs
Pịa Tinye Files mbubata foto ma ọ bụ vidiyo na i weere ma ọ bụ dere n'oge gị bithday ọzọ.
Nzọụkwụ 2. Tinye ụbọchị ọmụmụ songs ka usoro ihe omume
Gaa na hazie taabụ kpọmkwem ịdọrọ ụbọchị ọmụmụ songs ka Music track. Ị nwere ike tinye ọtụtụ ndị ọzọ ekwekọghị na ngosi mmịfe.
Gaa Asuanetop taabụ ịzọpụta ngosi mmịfe i mere. E nwere ọtụtụ nhọrọ dị ka Ọkụ ka DVD, Save ka Computer na ọtụtụ ndị ọzọ.